မန်စီးတီး vs မန်ယူနိုက်တက်?? ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂၈ အတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ - xyznews.co
မန်စီးတီး vs မန်ယူနိုက်တက်?? ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၂၈ အတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ
March 5, 2022 - by Editor
ဒီတစ်ပတ်မှာ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် စိတ်၀င်စားစရာ အကောင်းဆုံး ပွဲကြီးပွဲကောင်း ကတော့ မန်ချက်စတာစီးတီး နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် တို့ အီတီဟတ်မှာ ကစားရမယ့် ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် ကြယ်ပွင့်ဟောင်း မိုက်ကယ်အို၀င်ဟာ အဆိုပါ ပွဲစဉ် အပါအ၀င် ဒီတစ်ပတ်မှာ ကစားရမယ့် လိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
၁~ဘန်လေ vs ချဲလ်ဆီး
ဘန်လေရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ form ဟာ ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးပွဲမှာ လက်စတာကို ရှုံးခဲ့ခြင်းကတော့ အခွင့်အရေးကောင်းကို လွဲချော်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။ ဘန်လေဟာ လက်ရှိမှာ လက်ကျန်ပွဲတွေကို ကစားနေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူတို့ရဲ့ form ဟာ အနည်းငယ် ယိုင်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးကတော့ ၀င်ဘာလေဖိုင်နယ်ကနေ အဆိုးထက် အကောင်းတွေက များပြီး ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ လီဗာပူးနဲ့ ပွဲမှာ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ဟာ လက်ရှိနဲ့ ရာသီကုန်ကြားမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာ ဂိုးတွေ အများကြီး မြင်တွေ့ရမယ်လို့တော့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ချဲလ်ဆီးဟာ ဘန်လေအတွက် အရမ်းကို တောင့်တင်းလွန်းနေပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : ဘန်လေ ၀-၁ ချဲလ်ဆီး
၂~လီဗာပူး vs ၀က်ဟမ်း
လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲစဉ်မှာ အတော်လေးကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကလော့ရဲ့ လက်ထက်မှာ ရထားတဲ့ အကောင်းဆုံး လူစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ လူရွေးချယ်ရာမှာ အနည်းငယ် ခေါင်းခြောက်နေမှာပါ။ ဆာလား မာနေး ဂျိုတာ ဒီယက် ဖာမီနို တို့ကို တစ်ပြိုင်နက် ပွဲထုတ်သွားလို့ မရပါဘူး။ ဒါဟာ နည်းပြအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ပြသနာပါ။
၀က်ဟမ်းဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ကစားပုံ မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဝုဖ်ကို နိုင်ခဲ့တာဟာ ကြီးမားတဲ့ နိုင်ပွဲပါ။ သူတို့ဟာ top4အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရှင်သန်အောင် ဆက်လုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်မှုလည်း အနည်းငယ် ပြန်ရလာမှာပါ။ ဒီမှာတော့ နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့် ၄ နေရာအတွက် ၀က်ဟမ်းထက် အခွင့်အလမ်း ပိုများတဲ့ အသင်းတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ လီဗာပူးတို့ သွင်းဂိုးတစ်ချို့ ရမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တိုက်စစ်ကစားပုံဟာ အတော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : လီဗာပူး ၃-၁ ၀က်ဟမ်း
၃~၀က်ဖို့ဒ် vs အာဆင်နယ်
၀က်ဖို့ဒ်ဟာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကနေ သရေတစ်မှတ်နဲ့ ပြန်လာကာ သူတို့ရဲ့ ရုန်းအားကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကံကောင်းမှုတွေ ရခဲ့ပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံး အဝေးကွင်း ၂ ပွဲ ဖြစ်တဲ့ ဗီလာ နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် တို့ဆီက ၄ မှတ် ရနိုင်ခဲ့တာဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက် အနည်းငယ် နောက်ကျသွားပြီလို့ ကျွန်တော် ခံစားမိနေပါတယ်။
အာဆင်နယ်ဟာ ဝုဖ်ကို နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲပြီးကတည်းက မကစားရသေးပါဘူး။ သူတို့ဟာ အခုချိန်မှာ ယုံကြည်မှုတွေ ပြည့်ဝနေပါတယ်။ အဆင့် ၄ နေရာအတွက် သူတို့က အခြေအနေ အကောင်းဆုံးလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့ ကစားတာကို ရှောင်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၀က်ဖို့ဒ်ဟာ အာဆင်နယ်ကို အစွမ်းကုန် တုန့်ပြန်သွားမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အာဆင်နယ်ပဲ နိုင်ပွဲ ရသွားမှာပါ။
ခန့်မှန်းချက် : ၀က်ဖို့ဒ် ၂-၁ အာဆင်နယ်
၄~မန်စီးတီး vs မန်ယူနိုက်တက်
စီးတီးဟာ အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး မကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ချန်ပီယံတို့ရဲ့ လုပ်လေ့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲ နိုင်ပွဲရအောင် ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ ပီတာဘရော့နဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ပွဲစဉ်က ဂျက်ဂရီလစ်ခ်ျရဲ့ သွင်းဂိုးမှာ ဖိုဒန်ရဲ့ pass နဲ့ ဂရီလစ်ခ်ျရဲ့ ထိချက် ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းသလဲဆိုတာ ကျွန်တော် မခွဲနိုင်ပါဘူး။ တကယ့်ကို ကောင်းတဲ့ဂိုးပါ။
ဒါဟာ ယူနိုက်တက်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေပါ။ သူတို့ဟာ ခက်ခဲတဲ့ပွဲတွေ ကစားရအုံးမှာပါ။ သူတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတွေက အီတီဟတ်မှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရခဲ့တဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရာသီတော့ ဒီလို လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် မမြင်မိပါဘူး။ စီးတီးဟာ တအားကို တောင့်တင်းနေမယ့် အပြင် ယူနိုက်တက်တို့ လာကစားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် တအားကို အာရုံစိုက်ထားမှာပါ။ သူတို့ ပွဲကို ထိန်းချုပ် ကစားသွားမှာပါ။ ယူနိုက်တက်တို့ ဂိုးသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် စီးတီးပဲ နိုင်သွားမှာပါ။
ခန့်မှန်းချက် : မန်စီးတီး ၃-၁ မန်ယူနိုက်တက်
၅~တော့တင်ဟမ် vs အဲဗာတန်
စပါးမှာ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်ဆုံး အသင်းဖြစ်မှာပါ။ သူတို့ဟာ တစ်ချို့အချိန်တွေမှာ တိုက်စစ်ဆင်တာ တအားကို ကောင်းပေမယ့် မစ်ဒယ်ဘရော့ကို ရှုံးခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလားပွဲစဉ်မှာတော့ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကွန်တီအနေနဲ့ သူ့အသင်းကို စိတ်ပျက်နေမှာပါ။ ဒါဟာ စိတ်၀င်စားစရာ ရက်သတ္တပတ်တွေ ဖြစ်နေမှာပါ။
အဲဗာတန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စီးတီးနဲ့ပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ တိုးတက်လာတဲ့ ခံစစ်ကစားပုံကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ဒါကို အပတ်တိုင်းလုပ်နိုင်မှာလား? သူတို့အနေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ တက်နိုင်သမျှ အမှတ်တွေ စုဆောင်းသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တန်းဆင်းဇုန်တိုက်ပွဲထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဗာတန်တို့ ဒီပွဲမှာ တစ်မှတ်ရယူနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲဟာ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ပွဲစဉ်မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် : တော့တင်ဟမ် ၁-၁ အဲဗာတန်
လက်စတာ ၂-၀ လိဒ်
အက်စတွန်ဗီလာ ၁-၁ ဆောက်သမ်တန်
နယူးကာဆယ် ၂-၁ ဘရိုက်တန်
နော့ဝှစ် ၁-၁ ဘရန့်ဖို့ဒ်
၀ုဖ် ၂-၁ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ်
Previous Article ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ ပုံစံသစ် ၊ ချဲလ်ဆီးပိုင်ရှင်သစ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ တူရကီသူဌေးကြီး ၊ နွေရာသီအတွက် ပြင်ဆင် ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article ယူကရိန်း နဲ့ အတူ ရပ်တည်ကြောင်း ပြသမယ့် အစီအစဉ်တွေကြောင့် ဒီတစ်ပတ် ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေကို မပြသဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ တရုတ်